Author: Kizilkree Shabar
Mashruuc-sharci waxa Golaha Wakiilada u soo bandhigi kara 1.
Fadhiyada Golaha Wakijiada Qod. Si uu u gudan karo xilalka kor ku sheegan, wuxuu Madaxweynuhu leeyahay awoodaha soo socda: Dastuurka waxa saldhig u ah mabaadi’da Islaamka. Doorashada Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha, oo isku mar loo codaynayo, kuna salaysan zomaliland u codaynta liistada, waxa Ia qaban doonaa bil ka hor dhammaadka muddada xilka Madaxweynaha hore. Waa inuu jidh ahaan iyo maskax ahaanba gudan karaa xilkiisa.
Dhammaan xorriyaaka qofka waxa shardi ah in ayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud, xasiloonida dalka ama xuquuqda qofka kale. Sekadu waa rukun lslaamiya, habaynteedana waxaa caddaynaya xeer-gaar ah. On the whole, the revisions tidied up the constitution and no fundamental changes have been made.
Uma bannaana qof shaqaale Dawladdeed ah inuu isu taago doorasho haddaanu muddada xeerku cayimay ka hor shaqo ka tegid codsan taas oo in laga aqbalaana ay waajib tahay. Dawladdu waxay horumarinaysaa hiddaha iyo dhaqanka suubban ee bulshada iyada oo isla markaa laga faa’iidaysanayo aqoonta bulshada adduunka.
Xidhiidhka Debedda Qod. Hawsha oo uu caafimaad darro darteed u gudan kari waayo.
Khiyaamo Qaran High Treason ama. Soddon 30 maalmood gudohood marka Golaha Wakiiladu ansixiyaan magacaabidda Wasiir ama Wasiir-ku-xigeen, waxa xilka u dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyada somalilnd uu goob joog yahay Madaxweynaha ama Madaxweyne-ku-xigeenka, haddii uu Madaxweynuhu ka maqan yahay dalka ama uu buko. Shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu awooddaas iyo karaamadaas sida ku cad Somalilnad u igmaday dawlad ku dhisnaan doonta kuna dhaqmi doonta Dastuurka.
Xubinta Golaha Guurtida uma bannaana inay qabato xil kale oo Qaran iyadoo xilkii loo xulay haysa; umana bannaana may xilka uga faa’iidaysato dano gaar ahaaneed. Xukuumaddu waa in ay dhiirri-gelisaa xeerna ka soo saartaa xaqa ay haweenku u leeyihiin in ay ka xoroobaan dhaqamada aan Shareecadda waafaqsanayn ee waxyeelada u leh jidhkooda iyo damurkooda.
Waxaa xilka ka qaadi kara madaxda qodobkan ku sheegan Madaxweynaha oo keliya. Hay’adda Shaqaalaha Dawladda 4. Waxbarashadu waa mid u danaynaysa dadweynaha, kuna habaysan waayaha iyo deegaanka gaar ahaaneed ee bulshada Somaliland.
Kala-diridda Golaha Qod. Tusmada Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland. Calanka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ka kooban yahay saddex midab oo isle’eg oo ballaadh u goglan.
Hab-maamuuska Madaxda Jamhuuryadda ee Qaranka Qod. Qofka xorriyadda laga qaaday waxa uu xaq u leeyahay in uu la kulmo sida ugu dhaqsaha badan qareenkiisa, qaraabadiisa ama ciddi kale ee uu codsado. Labada Gole ee Baarlamanku waxay yeelanayaan fadhiyo ay wadaagaan iyo kuwo gaar u kala ah.
Xeer-ilaaliyaha Guud; iyo dh.
Habka Buuxinta Jagada Bannaanaatay. Eedaysanuhu wuxuu xaq u Ieeyahay in go’aan maxkamadi ku ridday uu racfaan uga qaato maxkamadda ka sarraysa. Tilmaanta Guud ee Golaha Guurtida.
Haddii ay bannaanaato jagada xubin ka mid ah Golaha Wakuada ka hor lixda bilood ee ugu dambaysa muddada xilka Golaha, waxa loo soo buuxinayaa si waafaqsan xeerka, iyadoo xubinta cusubi ay dhamaystirayso muddada xilka Golaha ka hadhay. Maxamadda Sare waa hay’adda ugu sarraysa Garsoorka; isla markaana waxay tahay Maxamadda Dastuurka. Shaqada, Farsamada, Daryeelka iyo Badbaadinta Shaqaalaha. Xubnaha Golaha Wakiiladu waxay yeelanayaan mushahar iyo gunno xeer qeexo.
Golaha Wasiirada Qod. Hay’adaha Dawadda ee Gaarka ah. Labadi kal-fadhi waxaa u dhaxaynaya ugu yaraan 4 afar toddobaad, ugu badnaana 8 siddeed toddobaad. In uu fasiro micnaha xeerarka ka soo baxa Golayaasha dastuuriga ah iyo xeerarka degdegga ah iyada oo la raacayo Dastuurka.
Dhawrsanaanta Xubinta Golaha Wakiilada. Golaha Wakiilada waxa Ia kala diri karaa: Awoodda Xeer-dejinta ee Golaha Wakiilada.
Wax-ka-beddelka iyo Kaabidda Dastuurka.
Previous post Previous CP-7942G DATASHEET PDF
Next post Next ALFONS ZITTERBACKE PDF